Roborock wuxuu keenaa is faaruqinta dhexe sidoo kale | Qalabka Wararka
Roborock, shirkadda ku takhasustay horumarinta iyo soo saarista labada qalab nadiifiye ee Robot iyo xadhig la'aan, maanta waxay soo bandhigtay xirmo cusub oo Roborock Q7 Max + ah, moodelkii ugu horreeyay ee taxaneheeda cusub ee Q.
Alaabtan cusub, oo bixisa nuugista 4200PA ee xooggan waxay la shaqeysaa burush caag raagaya oo ka saara wasakh qoto dheer oo ka soo baxay roogagyada iyo godadka sagxadda. Buraashka caagga ah ayaa si aad ah ugu adkeysanaya in timaha isku dhuftaan, taasoo ka dhigaysa dayactirka mid sahlan. Intaa waxaa dheer, Q7 Max + xoqin iyo faakiyuum isku mar ah, adoo saaraya cadaadis joogto ah oo ah 300g iyo 30 heerarka socodka biyaha si loo habeeyo.
Ay la socoto ta cusub ee Auto-Empty Dock Pure ayaa si toos ah u faaruqinaysa taangiga kadib wareeg kasta oo nadiifin ah, Ogolaanshaha ilaa 7 toddobaad oo faaruqinta dadaalla'aan ah. Intaa waxaa dheer, markii ugu horeysay ee qaabka Roborock, 350ml haanta biyaha iyo 470ml koobka boodhka ayaa la isku daray si fudud loo isticmaalo.
Q7 Max+ waxaa lagu heli karaa madow iyo caddaan RRP ah €649, halka Robot-ka Q7 Max, sidoo kale la heli karo, uu leeyahay RRP oo ah €449.
Marka la eego heerka tignoolajiyada, shaqada khariidaynta cusub ee 3D waxay isku daraysaa alaabta guryaha waaweyn, sida fadhiga ama sariiraha, khariidada dusheeda, habkan booska guriga ayaa si fiican loo fahmay. Waxa kale oo ay u ogolaataa ikhtiyaarka ah in si ku habboon loo nadiifiyo agagaarka alaabta guriga iyada oo la taaban karo abka. Wali ku saleysan Roborock's PresciSense laser navigation navigation nidaamka, khariidadaha Q7 Max+ waxayna qorsheynayaan waddo nadiif ah oo hufan, iyadoo kuu oggolaaneysa inaad doorato habka ugu habboon, oo ay ku jiraan jadwalka iyo xitaa goobaha caadiga ah ee caadiga ah, sida nadiifinta ugu badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Roborock waxay keentaa faaruqinta bartamaha sidoo kale